Wagons | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ígwèỤgbọ okporo ígwèugbala
Akụkọ ozi ụgbọ ala
Anakpo Wagons ndi mmadu TCDD
Ndi oru ugbo agha nke TCDD Afyonkarahisar nke asaa duziri ya ka ha gboo ebe obibi na ebe izu ike nke ndi oru ugbo elu, ndi uzo na ndi na aru oru n’igwe ebe anabatara ha. TCDD [More ...]
A na-ewepụ Wepụ ndị nọchiri anya ndị ụgbọ oloko na Osmaneli Train Station
E wepụrụ ụgbọ ala Rusty ndị dịịrị maka ọdịnihu ha n'ọdụ ụgbọ oloko Osmaneli. Weregbọ ndị agha, laghachiri n'ụlọ nsí ahụ ebe ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ bi na ya, si na fromzọ Stategbọ mmiri Steeti. Ọdụ Bilecik [More ...]
Ugbo ala nke TÜDEMSAŞ meputara na-aga Austria
Turkey Railway Machines Industry Inc. na Sivas (TÜDEMSAŞ) emepụta site 22 "New Ọgbọ Freight n'ụgbọala" gawa Austria ka a napụta. Germany, Britain, Netherlands gaa n'ụgbọala ndị na-eme ka ụgbọ njem ụgbọ njem dị mfe [More ...]
Ọ na-emechi TÜDEMSAŞ ..? Nke a bụ azịza ya
Sivas Chamber of Commerce and Industry (STSO) bụ ụlọ ọrụ na-abụghị nke gọọmentị na-etinye aka ya na ụdị nsogbu na nsogbu niile nke Sivas. Sivas Chamber of Commerce and Industry (STSO), n’okwu ndị chọrọ nkọwa [More ...]
Nzaghachi na ntinye TÜDEMSAŞ na TÜRASAŞ
na Sivas, Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) E mechiri General Directorate ma mee mmeghachi omume iji jikọta azụmahịa ahụ na TÜRASAŞ na Ankara. Turkey Public n'ọrụ Foundation Sivas Branch President Abraham Honey, TÜDEMSAŞ hiwere na Ankara, Turkey [More ...]
Achọsi ike maka ụgbọ njem ụgbọ ala sitere na Europe
Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Cahit Turhan kwupụtara na n'ime nkwado ya na TÜDEMSAŞ-ụlọ ọrụ nzuzo, a ga-ekepụta ụgbọ ala narị anọ n'ogo maka ụlọ ọrụ GATX nke Austria, ma gbakwunye: [More ...]
Fate TÜDEMSAŞ ekwesịghị ịdị ka Iron na ígwè
Ationgbọ njem na okporo ụzọ ndị na-ahụ maka ọrụ Rịzọ Mịnịsta ala ala Abdullah Peker, otu n'ime mpaghara ọrụ ọrụ Sivas kachasị mkpa, ga-abụ TÜDEMSAŞ, dịka Sivas Demir Çelik, bụ nke emechiri na afọ ndị gara aga ma bụrụ onye na-abaghị uru. [More ...]
TÜDEMSAŞ ranknyere pasent 40 na 80 afọ
Lọ Ọrụ Njikọ na ilgbọ okporo ígwè na Onye Ọrụ Rụọ Isi Onye isi ala Abdullah Peker kwuru na ike ọchịchị niile anaghị achọ ịma mma nke TÜDEMSAŞ site n'oge gara aga ruo ugbu a. " Peker, n'akwụkwọ akụkọ ya, gbakwunyere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na otu ọnọdụ na mpaghara dị iche iche. [More ...]
Sivas 'Anya Baby TÜDEMSAŞ kwesịrị ịlaghachi na ụbọchị ochie ya
Fatih Kalkan, Onye isi oche Sivas nke Welfare Party, kwuru nkwupụta pụtara ìhè banyere ọdịnihu TÜDEMSAŞ. Kalkan kwuru na nkwupụta ya: “Otu n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe kachasị ukwuu na ndị isi na Sivas na Central Anatolia. [More ...]
Aggbọ oloko na-abata na mgbapụta nke ndị Elazig Ala Ọma Jijiji
Otu n’ime ebe nchekwa dị na Elazig, nke ala ọma jijiji na-eme, bụ ọdụ ụgbọ oloko dị n’etiti obodo. N'ebe a, ụgbọ ala 14 dị njikere ịnabata ụmụ amaala. Citizensmụ amaala kọọrọ Universal banyere ahụmịhe ha. Nailị na-ekwupụta na ha chọrọ nri, Nail Dinç kwuru, [More ...]
Central Sivas na Production nke National Freight Wagon
The New Generation National Freight Wagon nke emepụtara na Sivas bụ isi okwu nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan. Onye isi ala Erdoğan kwuru na nrụpụta nke New Generation National Freight Wagons nke emepụtara na TÜDEMSAŞ ga-aga n'ihu. TÜDEMSAŞ na-adịbeghị anya [More ...]
Sivas Ọ bụrụ na A ga-enwe TUDEMSAS
Abdullah Peker, Onye isi oche nke Ndị Ọrụ na andgbọ njem na ilgbọ okporo ígwè, kwuru na njikọta nke TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ na TÜVASAŞ na mbelata na mmechi nke ụlọ ọrụ atọ ahụ. [More ...]
Emere cedmụ Ugbo Egwuregwu Maka Ezumike n'ụlọ na-akpọrọ ụmụ akwụkwọ n'oge izu izu ụlọ
Emegoro umuaka eji ebu ngwongwo nke ulo n’ime izu uka ha bu nke anyi; Smụ akwụkwọ Sivas Western Middle School mere izu, Ngwongwo ụlọ nke ụlọ mepụtara site na inyocha ụgbọ ibu na-anya ụgbọ mmiri TÜDEMSAŞ'da nwetara ozi gbasara usoro mmepụta. 12 - 18 [More ...]
E ji TUDEMSAS mee ihe n'ụgbọ ụgbọ mmiri Switzerland Wascosa
Ejiri TUDEMSAS mee ihe n'ụgbọ ụgbọ mmiri Switzerland Wascosa; E nyefere ụgbọ ala ebu ngwongwo nke e mekọtara ọnụ na TÜDEMSAŞ-Ngalaba nkeonwe nye ụlọ ọrụ Switzerland. 25 pc Sgmmnss ụdị 40 ụkwụ mepụtara site na imekọ ihe ọnụ nke ọha na ndị nwe onwe [More ...]
Ntughari nke TÜDEMSAŞ mebere n'okporo uzo ugboala Austrian; Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) site H-ụdị Y25 bogies arụpụtara site si ọtụtụ mba ibu okporo ígwè na ụlọ ọrụ ndị na-a ọgbọ ọhụrụ nke ibu ụgbọala eji na nnukwu [More ...]
Turkey Railway Machines Industry Inc. ọhụrụ ọgbọ ibu ugbala enye oké uru na ọrụ na-eduzi uche nke ndị mba ọzọ na ụlọ ọrụ ndị na TÜDEMSAŞ. Na Germany, ụlọ ọrụ Hansewaggon na-arụzigharị azụmaahịa nke ụgbọ ala ekwentị, kemgbe ụbọchị emepụtara ya, [More ...]
E Kwesịrị Ikwenye Mpempe ego nke 2020 nke TÜDEMSAŞ!
Abdullah Peker, Onye isi oche nke Hak-Union nke ationgbọ njem na ndị na-arụ ọrụ okporo ụzọ, kwuru na ekwesịrị ịbanye na ntinye aka na TÜDEMSAŞ na mmemme ego 2020 nke afọ ma ọ bụghị na TÜDEMSAŞ enweghị ike imepụta ihe. Ndị na-ahụ maka ụgbọ njem Hak-Sen Genel [More ...]
Ntughari nke WWWWWWW nke wuruwuru nke MSB ka aghazie ya na TÜDEMSAŞ
Ntughari nke Cistern Wagons nke Ministry of National Defense ga-eme na TÜDEMSAŞ. Arif Koyuncu, Onye isi nke mmanụ ụgbọ mmiri na arụ ọrụ nke NATO POL Facilities (ANT) jikọtara na Ministry of National Defense (MSB) na Ilhan Maraşlıoğlu, Onye isi oche TÜDEMSAŞ [More ...]
Companieslọ ọrụ mba ụwa na-eduzi ngalaba ụzọ ụgbọ oloko zutere na RailExpo 2019 na Kiev, Ukraine. Turkey Railway Machines Industry Inc. (TÜDEMSAŞ) General Director Mehmet Basoglu, Isi nke Quality Control Department na Zühtü Çopur [More ...]
A ga-emegharị ụgbọ ala Volkswagen dị ka nke a
Turkey Locomotive na Engine ụlọ ọrụ dị ka (TULOMSAS), ndị German ibu Volkswagen ụgbọala-emepụta ọhụrụ factory kpọmkwem ndị e hiwere na Turkey na-atụ anya na-ebu "abụọ-storey n'ụgbọala" prototype oyiyi, oge mbụ na HaberTürk ... a na Turkey, TULOMSAS ' na i [More ...]
TÜLOMSAŞ na-akwado Buildrụ Wagon Wagon abụọ maka Volkswagen
German ibu Volkswagen ọhụrụ factory na Manisa ga-eweta kpọmkwem mgbe na-eme preparations maka iga site okporo ígwè nke akụkụ ụfọdụ nke Turkey, otu ihe dị mkpa ọmụmụ pụtara ọzọ na ga-eme ka a ọhụrụ olu a nke. Turkey Locomotives [More ...]
E nyochara ndi otu oru TOUAX na TÜDEMSAŞ
Nleta Touax General Manager Jerome Le Gavrian gaa na TUDEMSAS na Septemba 5 Taa, ndị ọrụ ụlọ ọrụ Touax, TUDEMSAS - mere atụmatụ ịmepụta ya na mmekorita ya na ngalaba ndị otu 90 ụkwụ Sgmmrs ụdị ụgbọ agha. [More ...]
Withgbọ njem na trailer na Europe
Emepụtara okporo ụzọ ahụ na mmekorita ya na Gökyapı na TÜDEMSAŞ. [More ...]
Wagons ochie wee bie ndu na TUDEMSAS
GBS ụdị ụgbọ ala emechiri emechi, nke na-abaghị uru na ogige ụgbọala TCDD, na-atụgharị gaa n'ụdị akpa akpa Lgs site na TÜDEMSAŞ ma weghachite akụ na ụba. TÜDEMSAŞ R&D otu na-atụ anya ya, Wagon Mmezi na 2014 [More ...]
TOUAX na-enyocha akwara n'ụgbọ ibu TCDEMSAS
Site na ya 11 puku ụgbọ mmiri na-ebu ibu, Touax, ụlọ ọrụ mgbazinye kasịnụ nke abụọ nke Europe, gara TÜDEMSA discuss iji kpoo mkpa nke ụgbọ ga-eji ụgbọ njem mba dị iche iche. Otu ụlọ ọrụ mba ofesi dị na Paris [More ...]
Egwuregwu Worldwa Mbụ
Taa na Akụkọ ihe mere eme: June 4, 1900 ka Sultan Abdulhamid's Hejaz Railway